Sales Presentation တစ်ခုပြင်ဆင်တဲ့အခါ …. - Better Version
Sales Presentation တစ်ခုပြင်ဆင်တဲ့အခါ ….
July 20, 2020 2020-07-20 10:51
ကျွန်တော်တို့ အရောင်းမန်နေဂျာတွေရဲ့ တာ၀န်မှာ ကုန်ပစ္စည်းမိတ်ဆက်မှု၊ ထုတ်ကုန်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တင်ပြမှုဟာ မဖြစ်မနေလုပ်ရတဲ့ တာ၀န်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး မိမိရဲ့ ထုတ်ကုန်ကိုမိတ်ဆက်မယ်၊ရောင်းချမှုတွေ လုပ်မယ်ဆိုရင် ဘာတွေပါ၀င်သင့်လဲ၊ ဘာတွေကိုထည့်ပြီးစဥ်းစားရမလဲဆိုတာ အရောင်းမန်နေဂျာတွေအနေနဲ့ သိထားသင့်ပါတယ်။
လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တွေအနေနဲ့ဆိုရင်လည်း ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်ငန်းပိုမိုချဲ့ထွင်နိုင်ဖို့ဆိုရင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူတွေရှာ တဲ့အခါမှာ မဖြစ်မနေလုပ်ရမှာက ကိုယ့်လုပ်ငန်းရဲ့ sales presentation, sales pitch ပါပဲ။ ကိုယ့်လုပ်ငန်းအကြောင်းကို အချိန်တိုတိုတွင်းမှာ ထိရောက်အောင်တင်ပြနိုင်တာမျိုးဟာ တကယ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်။
ဒီမှာတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Sales Presentation တစ်ခုလုပ်မယ့်အချိန်မှာ ထည့်သွင်းစဥ်းစားရမယ့် အချက် (၇) ချက်အကြောင်းကိုဆွေးနွေးပေးချင်ပါတယ်။
ဒါကအဓိကကျတဲ့အခြေခံအချက်ပါ။ ကိုယ်ချတဲ့ ရည်ရွယ်ပေါ်မူတည်ပြီး ကိုယ်ရဲ့လုပ်ပုံကိုင်ပုံ၊ စဥ်းစားပုံ
စဥ်းစားနည်းကပြောင်းသွားတာပါ။ ဒီ တင်ပြမှုမှာ ငါဘာရလာဒ်ရချင်တာလဲ၊ ကိုယ့်ပြောတာကိုနားထောင်မယ့် သူအတွက်ရော ဘာလိုရလာဒ်တွေရသွားစေချင်တာလဲ အစရှိတာတွေကိုသေချာစဥ်းစားပါ။ ဒီနေရာမှာ စဥ်းစားတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က “win -win” ဖြစ်ရင်ပိုပြီး အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။
ကျွန်တော်ပေးပေးနေကျ ဥပမာဆိုရင် “ကျွန်တော်တို့ Better Version က Sales Training တွေတက်ပြီး မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ ရောင်းအားမြင့်တက်လာစေဖို့”ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါမျိုးဆိုရင် နှစ်ဦးနှစ်ဖက်စလုံးအကျိုးရှိတာပေါ့ဗျာ။ ဒါကတော့ ဥပမာပေးရင်း ကြော်ငြာ၀င်လိုက်တာပါ။ 😄
၂) Target Audience
ဘာလို့ ဒါကိုစဥ်းစားခိုင်းတာလဲဆိုရင် တစ်ခါတလေမှာ ကျွန်တော်တို့က ၀ယ်သူဖောက်သည်ကို အရောင်းတင်ပြမှုလုပ်ရတာမျိုး ဖြစ်နိုင်သလို၊ ကိုယ့်အရောင်းအဖွဲ့အတွက် ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်အထက်လူကြီးကို ရောင်းချမှုကုန်ပစ္စည်းအသစ်ကို မိတ်ဆက်တာမျိုး၊ အရောင်းပိုင်းဆိုင်ရာ ရလာဒ်တွေ ၊တင်ပြချက်မျိုး တင်ပြရမျိုးလုပ်ရတတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် ကိုယ့် audience ကိုစဥ်းစားသင့်ပါတယ်။ Internal presentation နဲ့ external presentation ကတော့ အနည်းနဲ့အများကွာခြားမှုရှိပါတယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ Target ပေါ်မူတည်ပြီး ကိုယ်ပြင်ဆင်ရမယ့် Data တွေ၊ ကိုယ့် presentation မှာပါရမယ့် content တွေ၊ မက်ဆေ့တွေကိုကြိုပြီးစဥ်းစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၃) ၀ယ်သူဖောက်သည်တွေရဲ့ လိုအပ်ချက် နှင့် လိုအင် (Needs & Wants)
ပစ္စည်း၀ယ်ဖို့မပြောခင်မှာ ကိုယ့်၀ယ်သူတွေ၊ ဖောက်သည်တွေရဲ့ လိုအင်တွေလိုအပ်ချက်တွေသိဖို့လို ပါတယ်။ ဒါတွေက ၀ယ်သူတွေရဲ့ pain တွေ pleasure တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဥပမာ။ ။ ဖုန်းရောင်းမယ်သူ ဆိုပါတော့။ Iphone model အသစ်လေးနဲ့ဆိုရင် အရမ်းကိုမိုက်နေမှာဆိုရင် ဒါ ၀ယ်သူရဲ့ ကျေနပ်မှု​ (pleasure) ပါ။ ဖုန်းခဏခဏဟန်းနေလို့ Game ဆော့ရတာစိတ်ညစ်နေပြီလားဆိုရင် ဒါက ၀ယ်သူတွေရဲ့ Pain ပါ။ ဒါတွေကို ကိုယ်ကိုတိုင်လည်းသိဖို့လိုသလို ကိုယ့်၀ယ်သူကိုလည်း ဒါမျိုးလေးတွေပြောမယ်ဆိုရင် ၀ယ်သူရဲ့ စိတ်၀င်စားမှုအပြည့်ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၄) ကိုယ့်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း၊ ၀န်ဆောင်မှုရဲ့ အကျိုးရလာဒ် (Benefit & Feactures)
ဒါကတော့ ကိုယ့် product အကြောင်း တစေ့တစောင်းပေါ့နော်။ ဒီကုန်ပစ္စည်းဟာ ဘယ်သူတွေအတွက်သုံးသင့်တယ်၊ ခုနကပြောထားတဲ့ pain point တွေကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းမယ်၊ ၀ယ်သူဖောက်သည်တွေအတွက်လည်း ဘယ်လိုစိတ်ကျေနပ်စေတဲ့ အကျိုးရလာဒ်တွေရှိမယ်ပေါ့။
ဥပမာ ကိုယ့် ၀န်ဆောင်မှုကိုသုံးလိုက်လို့ အချိန်ဘယ်လောက်သက်သာသွားစေနိုင်တာမျိုး၊ ဘယ်လိုလုံခြုံ စိတ်ချမှုပေးနိုင်တယ်အစရှိတာမျိုးပေါ့။ ဒါက sales presentation ရဲ့ အရေးကြီးဆုံးအပိုင်းဖြစ်လို့ ၀ယ်သူတွေ၊ဖောက်သည်တွေကလည်း ဒီအပိုင်းကိုစိတ်၀င်စားကြပါတယ်။
ကိုယ့် product ရဲ့ Benefits တွေ Feactures တွေက sales presentation တစ်ခုမှာမဖြစ်မနေပါ၀င်သင့်တယ်အချက်ပါပဲ။ ဒါကြောင့် product description ကိုလည်းသေချာရေးဖို့လိုပါမယ်။
လိုအပ်ချက်၊ လိုအင်ကို မြင်သာထင်သာဖြစ်အောင် ပြောတတ်ဖို့လိုပြီး ကိုယ့်ရောင်းကုန်က ပေးမယ့် အကျိုးရလာဒ်နဲ့ ချိတ်ဆက်ပြောဆိုတင်ပြတတ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
၅) ကိုယ့်ကုန်ပစ္စည်း၊ ၀န်ဆောင်မှုရဲ့ ကွဲပြားခြားနားမှု (Differentiation)
ကြိုစဥ်းစားထားသင့်တာက ကိုယ့်ရဲ့ product အကြောင်းမိတ်ဆက်ပြီးတဲ့အခါ၊ အကျိုးရလာဒ်တွေပြောပြီးတဲ့ အခါ ပြန်ပြီးမေးခံရနိုင်တဲ့မေးခွန်းက လက်ရှိစျေးကွက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ ဘာကွာလဲ၊ ဘာကြောင့် ဒီပစ္စည်း၊ ၀န်ဆောင်မှုကိုသုံးသင့်လဲဆိုတာပါပဲ။
ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်တိုင်လည်း ကိုယ်၀ယ်ယူမှုမပြုခင်မှာ ဒီလိုမျိုး မေးတတ်ကြတယ်မလား။ ဒါကြောင့် ဒီအချက်က ကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပြီးစဥ်းစားထားပြီး အဆင်သင့်ပြင်ထားရပါမယ်။ ဒါကြောင့် sales presentation မှာProduct differentiation ကအရေးပါလို့ ကြိုပြီးပြင်ဆင်ထားပေးပါ။
၆) ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ဖို့။ (Credibility & Trust )
ဟုတ်တယ်။ ကိုယ်ရောင်းမယ့် ကိုယ့်၀ယ်သူ၊ ကိုယ့်ဖောက်သည်ကို ကိုယ့်ရဲ့ Brand၊ ကိုယ့် product၊ ကိုယ့်ကို ယုံကြည်လာအောင် ဘာတွေလုပ်မလဲဆိုတာက တကယ်အရေးကြီးပါတယ်။ တစ်ချို့က brand ကို ယုံလို့၀ယ်တယ်၊ တစ်ချို့က ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ တစ်ချို့က အရောင်းသမားကိုယုံလို့၀ယ်တယ်။
ဘာလို့၀ယ်၀ယ် အဓိကတော့ ယုံကြည်လို့၀ယ်တာပါပဲ။ ဒါကြောင့် ကိုယ့် ၀ယ်သူဖောက်သည်နဲ့ ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။
ဒီလိုမျိုး ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာ ကိုယ့်အရင်ဖောက်သည် တွေရဲ့ ကောင်းတဲ့ Reviews တွေ၊ recommendation တွေကအရေးပါပါတယ်။ ဒါမျိုးလေးတွေပြပြီး ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်နိုင်သလို ဥပမာပြပြီးလည်းယုံကြည်မှုတည်ဆောက်လို့ရပါတယ်။
ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ ဘယ်သူကတော့ ကျွန်တော့်တို့ product ကိုသုံးပြီး ဘယ်လိုလှသွားတာ၊ ဘယ်သူတောင် ဒီပစ္စည်းကိုအရမ်းကြိုက်လို့ ကျွန်တော်တို့ဆီကပဲအမြဲမှာတာလေဆိုတာမျိုးပေါ့။
ဒါမျိုးလေးတွေနဲ့လည်း ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်လို့ရပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ အချက်အလက် Data နဲ့လည်း ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ ကျွန်တော်တို့ ၀န်ဆောင်မှုကိုသုံးတဲ့လူဟာ အခုဆို ၁၀၀၀ အထက်ရှိနေပါပြီဆိုတာမျိုးပါ။
၇) အရောင်းပိတ်နိုင်ဖို့ (Sales Closing)
ဘာတွေဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း နောက်ဆုံးအရောင်းပိတ်နိုင်မှပဲအဆင်ပြေမှာလေ။ အဲ့ဒါကြောင့် ဘယ်လိုနည်းနဲ့ အရောင်းပိတ်နိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေလည်း ကြိုစဥ်းစားထားဖို့လိုပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ အရောင်းပိတ်နည်းတွေ၊ ကိုယ့် customer နဲ့ ကိုက်မယ့် အရောင်းပိတ်နည်းတွေကြို စဥ်းစားထားပေးပါ။ဘယ်နည်းကအကောင်းဆုံးဆိုတာထက် ဘယ်နည်းကကိုယ့်နဲ့၊ ကိုယ်၀ယ်သူနဲ့ ကိုက်မလဲ ဆိုတာပဲအရေးကြီးလို့ အရောင်းပိတ်နည်း တွေကိုလည်း အလျင်းသင့်သလို့သုံးနိုင်ရင် ကိုယ့်ရဲ့ရောင်းအားပိုတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကဲ … ဒီလောက်ဆို Sales Presentation တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဘာတွေကို စဥ်းစားရမလဲဆိုတာ သေချာနားလည် လောက်ပြီထင်ပါတယ်။
တကယ်ကို ထိရောက်တဲ့ Sales presentation တစ်ခုဖန်တီးပြီးရောင်းအားတွေများများတက်ကြပါစေ။
ဒါနဲ့ အရောင်းပိတ်နည်းတွေအသေးစိတ်သင်ချင်တဲ့ သူတွေအတွက်ဆိုလည်း ကျွန်တော်တို့ Better Version မှာသင်ကြားပေးနေတဲ့ “Better Salesman” အတန်းရှိပါတယ်။
သင်တန်းအပ်ချင်တယ်ဆိုရင် မက်ဆေ့ကနေရော ၀၉၄၂၄၆၃၈၃၈၀ ကိုဆက်သွယ်ပြီးလည်းစုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
Sales Promotion ဘယ်လိုလုပ်မလဲ?